I-Android Q izoletha iVulkan yawo wonke umuntu | Kusuka kuLinux
I-Android Q inguqulo elandelayo okuzokwenzeka ku-Android 9 noma ku-Android Pie. Uhlobo lweshumi luzoletha inani elikhulu lokuthuthuka, kusuka kuzici ezintsha kwamanye ama-API alo ukunika abahleli ukusebenza okusha obekungekho kuzinguqulo ezedlule, ekuthuthukisweni kwezokuphepha, ubumfihlo obudlula ekuphathweni okungcono kanye nasekulawulweni okukhulu kwezimvume zezinhlelo zokusebenza abasebenzisi abangakwenza, nokunye okude njll.
I-Android 10.0 noma i-Android Q, nayo iza kakhulu ilungele izingcingo ezizayo zesikhathi esizayo, njengezimo eziguqukayo njengeSamsung Foild eyethulwe ezinyangeni ezedlule. Ngeke kube kuphela, sekukhona abanye abakhiqizi abazokwethula izingcingo ezisongwayo futhi yingakho iGoogle ifune ukuzivumelanisa kangcono nalezi zinsiza zesikhathi esizayo. Ibuye ibe nezithuthukisi ezinhle kwi-AI API yayo, ukunikeza abathuthukisi kuze kube yizici ezingama-60 zenethiwekhi ezintsha. Kube khona nokupholisha okungafunwa ngabathuthukisi ePie.
Kepha kubathandi bemidlalo ye-Android, futhi banezindaba ezinhle zakho. Kuze kube manje, imidlalo yevidiyo nezinye izinhlelo zokusebenza obekufanele zisebenzise ihluzo bezisuselwa ku-OpenGL. Ukusekelwa kweVulkan kuvele ku-Android ngamahloni, kepha manje ku-Android Q kuzoba yisidingo esiyisisekelo sayo yonke isoftware ofuna ukuyifaka kunguqulo engu-64-bit. Ngakho-ke, sizoba nawo wonke amandla we IVulkan graphical API yawo wonke umuntu. Lokho kuhambisana nokuthuthuka kwe-ART ukuthuthukisa ukusebenza nokusetshenziswa kwebhethri okuphansi kuzwakala kukuhle.
Umehluko phakathi kwemiphumela phakathi kwe-OpenGL vs Vulkan uyamangalisa. Imidlalo yevidiyo izothatha igxathu elikhulu iye phambili nale phrojekthi yeKhronos Group futhi masikhumbule ukuthi ivela kukhodi yomthombo ekhishwe ngu AMD kusuka kuphrojekthi yakho ye-Mantle. Ungabona isampula elincane emfanekisweni oyinhloko wale ndatshana, ngomdlalo wevidiyo nge-OpenGL ES futhi efanayo neVulkan. Ungazihlulela wena, kepha imiphumela isobala ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-Android Q izoletha iVulkan yawo wonke umuntu